Sida Loo Sameeyo Website, Ecommerce, Ama Codsiga Qorshayaasha Midabka | Martech Zone
Sida Loo Sameeyo Website, Ecommerce, Ama Qorshayaasha Midabka Codsiga
Arbacada, December 15, 2021 Arbacada, December 15, 2021 Douglas Karr
Waxaan wadaagnay maqaallo kooban oo ku saabsan muhiimada midabka marka la eego summada. Mareegaha, goobta ecommerce, ama moobilka ama codsiga shabakadda, waa sidaas oo kale muhiim. Midabada ayaa saameyn ku leh:
Aragtida hore ee astaanta iyo qiimaheeda - tusaale ahaan, alaabada qaaliga ah waxay inta badan isticmaalaan madow, casaanka ayaa tilmaamaya farxad, iwm.
Go'aannada iibsashada - kalsoonida astaanta waxaa lagu go'aamin karaa farqiga midabka. Nidaamyada midabka jilicsan ayaa laga yaabaa inay noqdaan kuwo dumar ah oo la aamini karo, kala duwanaansho adag ayaa laga yaabaa inay noqoto mid degdeg ah oo qiimo dhimis ah.
Isticmaalka iyo khibrada isticmaalaha - midabadu waxay leeyihiin maskax maskaxeed iyo saamaynta jireed sidoo kale, taasoo ka dhigaysa mid fudud ama aad u adag in la dhex maro interface interface.
Muhiimad intee le'eg ayuu u leeyahay Midabka?
85% dadku waxay ku andacoodeen in midabku uu saamayn wayn ku leeyahay waxay iibsadaan.
Midabadu waxay kordhiyaan aqoonsiga sumadda celcelis ahaan 80%.
Aragtida midabka ayaa mas'uul ka ah 60% aqbalida ama diidmada alaabta.
Marka la go'aaminayo nidaamka midabka ee mareegaha, waxaa jira tillaabooyin lagu faahfaahiyay macluumaadka la socda:
Midabka Koowaad - Dooro midab ku habboon tamarta alaabtaada ama adeeggaaga.
Midabka ficil - Tani way ka maqan tahay macluumaadka hoose, laakiin aqoonsiga midabka ficilka aasaasiga ah iyo midabka ficilka labaad ayaa aad waxtar u leh. Waxay baraysaa dhagaystayaashaada inay diiradda saaraan walxaha is-dhexgalka isticmaalaha ee gaarka ah ee ku salaysan midabka.
AMidabo dheeraad ah – Dooro wax dheeraad ah midabada kaabaya midabkaaga aasaasiga ah, midabada ugu habboon ee sameeya midabkaaga aasaasiga ah pop.
Midabada Gunta – U dooro midabka gadaasha degelkaaga – laga yaaba in uu ka gardarro yar yahay midabkaaga aasaasiga ah. Maskaxda ku hay qaabka mugdiga iyo iftiinka sidoo kale.. goobo badan oo badan ayaa ku daraya naqshadaha midabka iftiinka ama mugdiga.
Noocyada Wajiga - Dooro midabka qoraalka ku jiri doona mareegahaaga - xasuusnoow in wejiga madow ee adag uu naadir yahay oo aan lagu talineynin.
Tusaale ahaan, shirkaddayda Highbridge u sameeyay summada khadka tooska ah ee soo saaraha dharka oo doonayay in ay dhisaan goob ecommerce-ka tooska ah ee macaamiisha ah halkaas oo ay dadku awoodi karaan ka iibso dharka online. Waxaan fahamnay dhageystayaasheenna bartilmaameedka ah, qiimaha astaanta, iyo - sababtoo ah calaamaddu waxay ahayd inta badan dhijitaalka ah laakiin sidoo kale waxay lahayd wax soo saar jireed - waxaan diiradda saarnay nidaamyada midabka oo si fiican uga shaqeeyay daabacaadda (CMYK), palette dharka (Pantone), iyo sidoo kale digital (RGB iyo Hex).
Tijaabinta Qorshaha Midabka ee Cilmi-baarista Suuqa
Nidaamkeena xulashada qaabka midabkeena ayaa ahaa mid xoogan.
Waxaan samaynay cilmi-baaris suuq-geyneed taxane ah oo midabyo asaasiga ah oo leh dhagaystayaasheenna bartilmaameedka ah kuwaas oo naga dhigay hal midab.
Waxaan sameynay cilmi baaris suuqgeyn ah oo taxane ah oo midabo sare iyo jaamacadeed ah iyadoo aan la kaashanayno dhageystayaasheenna bartilmaameedka u ahaa halkaas oo aan ku soo koobnay nidaamyada midabka qaarkood.
Waxaan samaynay maaweelo alaab ah (baakadaha badeecada, summada qoorta, iyo summada laalaada) iyo sidoo kale maaweelada ecommerce oo leh nidaamyada midabka waxaana siinay kuwa macmiilka iyo sidoo kale dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee jawaab celinta.
Sababtoo ah sumaddoodu waxay si weyn ugu tiirsanayd xilliga, waxaan sidoo kale ku darnay midabada xilliyeedka isku dhafka. Tani waxay u anfacaysaa ururin gaar ah ama muuqaalada xayeysiisyada iyo wadaaga warbaahinta bulshada.
Waxaan soo marnay habkan in ka badan nus darsin jeer ka hor inta aanan dejin nidaamka u dambeeya.
Iyadoo midabada calaamaduhu yihiin casaan khafiif ah iyo cawl madow, waxaan horumarinay midabada waxqabadka inuu noqdo hadh cagaaran. Cagaarku waa midab ficil ku jihaysan sidaa awgeed waxa ay ahayd doorasho aad u wanaagsan in indhaha isticmaalayaashayada loo soo jiido walxaha ficil ku jihaysan. Waxaan ku darnay roganka cagaarka ah ee ficiladeena labaad (xuduuda cagaaran oo leh asal cad iyo qoraal). Waxaan sidoo kale tijaabinaynaa hadhka madow ee cagaarka ah midabka ficilka ee ficilada duleelka ah.
Tan iyo markii aan bilownay goobta, waxaan ku darnay raadraaca jiirka iyo khariidadaha kulaylka si aan u eegno walxaha ay dadka nagu soo booqda ay soo jiidanayaan oo ay la falgalaan inta ugu badan si loo hubiyo in aan haysano nidaam midab oo aan u ekayn mid wanaagsan… si fiican ayuu u shaqeeyaa.
Midabada, Meel Cad, iyo Astaamaha Cunsurka
Samaynta nidaamka midabka waa in had iyo jeer la dhammeeyaa iyadoo lagu tijaabinayo is-dhexgalka guud ee isticmaalaha si loo ilaaliyo isdhexgalka isticmaalayaasha. Goobta sare, waxaan sidoo kale ku darnay xadad gaar ah, suuf, dulmar, radiuses xadka, sawir-qoritaan, iyo wejiyada qoraalka.
Waxaan u soo bandhignay hagaha summeynta buuxa ee shirkadda si ay ugu qaybiso gudaha gudaha wax kasta oo suuqgeyn ama alaab ah. Joogteynta calaamaddu waxay muhiim u tahay shirkaddan sababtoo ah way cusub yihiin mana lahan wax wacyigelin ah xagga warshadaha xilligan.
Waa kan Natiijadii Bogga Ecommerce oo leh Qorshaha Midabka
Closet52 Bogga Guriga
Bogga Ururinta Closet52
Closet52 Bogga Alaabta
Isticmaalka Midabka iyo Indho la'aanta Midabka
Ha iloobin tijaabinta isticmaalka isbarbardhigga midabka ee qaybaha goobtaada. Waxaad tijaabin kartaa nidaamkaaga adigoo isticmaalaya Qalabka Imtixaanka Helitaanka Mareegta. Nidaamkeena midabka, waxaan ognahay inaan leenahay arrimo isbar-bardhig ah oo aan ka shaqeyn doono wadada hoosteeda, ama waxaa laga yaabaa inaan xitaa fursado u haysanno isticmaalayaashayada. Waxa xiiso leh, fursadaha arrimaha midabka ee dhegaystayaasheenna bartilmaameedku aad bay u hooseeyaan.
Indho la'aanta midabku waa awood la'aanta in la dareemo faraqa u dhexeeya qaar ka mid ah midabada ay isticmaalayaasha naafada ah ee aan midabka lahayn ay kala saari karaan. Indho la'aanta midabka waxay saamaysaa shan ilaa siddeed boqolkiiba ragga (qiyaastii 10.5 milyan) iyo in ka yar boqolkiiba hal haweenka.
Kooxda ku sugan WebsiteBuilderExpert waxay soo ururiyeen xogtan iyo maqaalkan la socda ee faahfaahsan Sida Loo Doorto Midabka Mareegtaada taasi waa mid aad u qoto dheer.
Tags: midabada waxqabadkamidabada asalka ahmidabada sumaddaugu yeer midab ficilarmaajo52midabkanidaamka midabkanidaamyada midabkamidabka ecommercenidaamka midabka ecommercesida loo tijaabiyo midabadacilmi baarisnidaamka midabka app mobilemidabada aasaasiga ahmidabada labaaddooro midabyomidabyada jaamacaddatijaabinta nidaamka midabkatijaabinta nidaamyada midabkamidabada noocanaqshadeynta adeegsadahadesign webqaabeynta bogga
Sellfy: Ku dhis Alaabta Iibka Ganacsiga Ecommerce-ga ama Diiwaangelinta Daqiiqado gudahood
Shopify: Sida Loo Barnaamijyo Cinwaannada Mawduuca firfircoon iyo Sharaxaadaha Meta ee SEO iyadoo la adeegsanayo Liquid